Xuska Maalinta Memorial Day 2021 ee ciidamada
Tani waa Faallo ka turjumaysa aragtida dowlada Mareykanka.
Isniinta ugu dambeysay Bisha May sanad kasta, Mareykanku waxaa ay xusaan dadka ku jirey Ciidamadda hubaysan oo ku waayey noloshooda ayagoo ku jiro shaqo qaran oo ay dalkooda u hayeen.
Waa Munaasabad lagu xasuusto naf hurnimada ay sameeyeen Kuwa yar oo ka mid ah dad badan, waana aqoonsi loo sameynayo waxii ay ku tareen difaaca dalkooda iyo aragtidiisa
Markii ugu horeysay ee la xusey maalintan waxa ay ahayd 1868, Saddex sano kadib markii lasoo gabagabeeyey dagaalkii ahliga ahaa ee Mareykanka, Maalintan Xuska, waxaa loogu yeeraa Maalinta qurxinta, ujeedkuna ma’ahan in lagu xasuusto maalintan dabaal-dega maalin gaar ahaa ama dagaal gaar ah, laakinse taasi bedelkeeda waxaa u loo jeediyaa dadka Mareykanka inay xasuus naadaan askartii ku dhimatey, loona maamuuso kuwa ku dhintey dagaaladda ayadoo qabuurahooda lagu qurxinayo Ubaxyo iyo xarko.
Malinka ugu horeeyso ee maamusa maalinkaasi ugu yraan 5,000 dad ah ayaa qurxiyo qabuuraha 20,000 Ciidamo dagaal oo ku duugan Qabuuraha Qaran ee Arlington ee ku yaalo Washington, D.C. ayadoo aan la geeyinin nooca dagaal ay galeen. Munaasabadda ayaa caado ka noqotey ku faaftey guud ahaan dalka Mareykanka.
Maanta, Magaalooyinka dalkan mareykanka ayaa u dabaal dego maalintaan ayagoo si Sharaf leh kula kula midoobayo shaqaalaha Military-ga, iyo kuwa ka tirsan ururadda Dadka howlgabka ah.
Dadka ayaa booqdo Qabuuraha iyo meelaha xafladan. Waxaana qaarkood ay qaataan ubax yar oo guduudan si loogu xasuusto dhimashada.
Waxaa Xafladan maamuus ee dhaqanka ah ay bilaabatey markii uu dhacay dagaalkii Labaad ee dunida markaasoo u uku bilowdey gabay uu qorey askari u gabyey saxiibkiis ku dhintey magaalada Ypress, oo ku taalo dalka Belgium horaantii bishii May sanadkii 1915, markaasoo middabka Gaduudka Furan Ubaxyo ah ay kasoo dhex baxayeen kaymaha xeryaha iyo qabuuraha askartan.
Waxaana si la mid ah Maalinkasto oo manta ah, lagu maamuusaan maalintan Calanmo yar yar iyo ubaxyo midabo badan oo la suro qubuuraha ka jira dalka ee ay ku jiraan halyeeyadda Ciidamada ahaa iyo Ubaxyo yar yar oo lagu dhejiyey godad badhamo oo u taagan askartii ku dhimatey ayagoo difaacayo dalkooda.
Waxey u dhinteen ayagoo difaacayo nolosha, qiimaynaya waxey aaminsanyihin, iyo sharafta ay heleen howlahoodii naf hurniom oo waligood ay lahaan doonaan.